जनताको उपचारका लागि अहोरात्र खट्दै बिरामी जाँच्न अस्पताल धाउँछन् भुटानी प्रधानमन्त्री – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/जनताको उपचारका लागि अहोरात्र खट्दै बिरामी जाँच्न अस्पताल धाउँछन् भुटानी प्रधानमन्त्री
जनताको उपचारका लागि अहोरात्र खट्दै बिरामी जाँच्न अस्पताल धाउँछन् भुटानी प्रधानमन्त्री
हाम्रो नेता–मन्त्री उपचारका लागि विदेश सयर गर्छन् । उनीहरुको उपचारका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिन्छ । भुटानका प्रधानमन्त्रीको अवस्था भने फरक छ । उनी आफ्नो उपचार होइन, जनताको उपचारका लागि अहोरात्र खटिन्छन् । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि उनी चिकित्सक थिए । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि उनी रोगीको उपचारमा निरन्तर खटिने गरेका छन् । अहिले पनि उनी सातैपिच्छे अस्पताल धाउने गरेका छन् ।
अर्को रमाइलो कुरा, नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको बेला भुटानी प्रधानमन्त्री चिकित्सकको रुपमा उद्वारमा खटिएका थिए । भुटानका प्रधानमन्त्री डा. लोटे त्सेरिङ स्पष्टसँग आफ्नो मातृभाषासँगै नेपाली, बंगला जस्ता भाषामा भाषण दिन सक्ने उनी भुटानका एक बहुप्रतिभावान व्यक्तित्व हुन् । उनको जीवन व्यक्तिगत जीवनशैलीबाट भिन्न छ । जहाँ खान्छन् पेशा वा देशकै लागि खान्छन् ।
उनले दुई जना धर्मपुत्र पालेका छन् । उनीहरु नै उनका सन्तानहरु हुन् । खानमा कुनै लोभ र मिठासको भोका छैनन् उनी । लगाउनमा अधिंकाश समय मौलिक भुटानी पहिरनमा भेटिन्छन् भने कुनैबेला उनी औपचारिक पहिरनमा पनि देखिने गर्छन् ।
सन् २०१८ को नोभेम्बर महिनामा प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन् उनी । प्रधानमन्त्री चुनिएको चार महिनापछि उनीसँग एक भुटानी स्थानीय पत्रिकाले अन्तर्वार्ता लिएको थियो । सो अन्तर्वार्तामा उनले स्पष्टसँग आफ्नो बिहानी पनि कामबाटै सुरु हुने र रात पनि पेशासँगै ढल्कँदै जाने स्पष्ट बताएका थिए ।
सो अन्तर्वार्तामा भने जस्तै उनको जीवनशैली बदलिएको छैन । परिवार भनेर आफ्नो मान्ने कोही छैनन् । धर्मपुत्र पालेका ती दुई छोराहरुलाई पनि दिने समय कम छ । दिनमा २४ घण्टा हुन्छ । त्यसमा १६ घण्टा उनले कामलाई नै दिने गरेका छन् । हप्तामा दुई दिन र नभ्याएको खण्डमा एक दिन त उनी जस्तो सुकै काम छाडेर पनि अस्पतालमा जाने गरेका छन् । त्यसैले उनको खानपान, व्यायाम र अरु व्यक्तिगत कामहरुको कुनै निश्चित समय छैन ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमा पनि कोरोना, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग सिल
घर चिन्न घर छाडौँ तर, घर नबिर्सौं
प्रियंका र आँचलपछि अहिले केकी अधिकारीको बिहेको चर्चा !
कालापानी लगायत नेपाली भूमी फर्काउन नेपालले सुरु गर्यो कुटनीतिक पहल, परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्न भारतलाई पठायो प्रस्ताव